Maxaa laga yiri derbiga muranka dhaliyay ee Kenya ay ka dhiseyso Beled-Xaawo? – Kalfadhi
Maxaa laga yiri derbiga muranka dhaliyay ee Kenya ay ka dhiseyso Beled-Xaawo?
January 9, 2018 Kalfadhi
Shacabka Beled-Xaawo ayaa dhammaadkii sanadkii hore dhigay dibadbaxyo waaweyn oo ay uga soo horjeedeen darbi weyn oo dowladda Kenya ay dooneyso inay ka dhiska xadka Soomaaliya. Dadku waxay 22-kii Diseembar dhagaxyo kala hortageen ciidanka Kenya ee wax ka waday dhismaha darbiga. Waxay ku doodayeen in dhismaha uu gudaha u soo galay magaalada. Warkaas markii uu shaacay waxaa magaalada booqday wafdi xaqiiqo-raadin ah oo ay dirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Wafdigan oo isugu jiray wasiirro, saraakiisha socdaalka oo heer federaal ah iyo kuwa dowlad-goboleedyada ayaa u kuurgalayay walaaca ay qabaan dadka qaar ee ku aaddan in Kenya ay derbi ka dhiseyso gudaha Soomaaliya.
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah, Cabdi Faarax Juxa oo wafdiga hoggaaminayay ayaa sheegay inuu soo arkay derbiga oo la dhisay ilaa 7M, balse hadda uusan socon wax dhisme ah, inkastoo uu jiro qorshaha lagu sii wadayo.
Wasiirka oo la hadlaayay VOA-da ayaa xusay in aysan ka hadli karin dhismaha in marayo dhulka Kenya ama in uu gudaha u soo galay dhulka Soomaaliya balse waxa uu ku gaabsaday warbixinta ay soo uruuriyeen inay tahay mid farsamo oo ay xukuumaddu la wadaagayaan.
Guddiga difaaca ee Barlamaanka Soomaaliya ayaa qeyb ka ahaa mas’uuliyiintii tagtay degmada Beled-Xaawo. Xildhibaan Jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) oo ka mid ahaa wafdigii xaqiiqo-raadinta ahaa ayaa mudaneyaasha Aqalka Sare u jeediyay sharraxaadda waxyaabihii ay soo arkeen. Wuxuu sheegay in 790 guri oo shacab Soomaali ah ay deggan yihiin ay hadda mareen dhinaca Kenya marka loo eego dhismaha darbiga.
Xildhibaanka ayaa tilmaamay in ay la kulmeen shacabka Beled-Xaawo oo si weyn uga dhiidhinaya falka ay ku kacayso Kenya, isagoo sanatarrada xusuusiyay in arrintaan aysan mudneyn in laga aamuso.
Xoghayaha Guddiga Difaaca ee Barlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Sadiiq Warfaa oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in aysan oggolaan doonin taako ka mid ah dhulka Soomaaliya in ay Kenya qaadato. Wuxuu intaas ku daray in ay qorsheynayaan arrintaan madaxweyneyaasha labada dal, Farmaajo iyo Kenyatta inay si gaar ah uga wadahadli doonaan.
Sidoo kale wuxuu caddeeyay inay xogtooda la wadaagi doonaan fadhiga ugu horreeya ee Golaha Shacabka oo hadda ku jira fasax labo bilood ah iyo sidoo kale kulanka Golaha Wasiirrada ee ugu soo horreeya.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegaya in ay u arkaan, in Kenya iyadoo ka cararaysa kiiska badda ay mowjad kale ku fureyso Soomaaliya, mar haddii wareeggii koowaad looga guuleystay kiiska badda ee horyaalla Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda.
Dowladda Soomaaliya iyo maamul-goboleedka Jubbaland ayaa hal mowqif ka taagan arrinta derbiga sida uu Kalfadhi u sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland. Waxay aaminsan yihiin qaddiyadda dhulka Soomaaliya inay hal meel uga soo wada jeestaan.
Wasiirka oo ka mid ahaa wafdiga ayaa yiri “waxaan soo aragnay dhismo weyn oo laga sameeyay biro shub ah, tiirar iyo siligyo la isku xiray, iyo god halkaasi laga qoday. Billowga godka meesha laga qoday waa xudduudda Kenya marka la fiiriyo soohdintii uu gumeystihii calaamadeeyay. Balse marba marka ka dambeysa waxaa la moodaa in uu xagal u soo galayo Soomaaliya oo meeshii uu ka billowday ka yara sikanayo. Laakiin weli waxaa la dhihi karaa wuxuu ku jiraa dhanka Kenya.”.
Beled-Xaawo oo dhacda waqooyiga gobolka Gedo waa magaalo ku taalla xadka Soomaaliya iyo Kenya. Waxay meel muhiim u ah ganacsiga. Waxay kulmisaa ganacsato Soomaali ah iyo kuwo kale oo ka yimaada dalalka Kenya iyo Itoobiya.
Waxaa la sugayaa go’aanka xukuumadda Soomaaliya iyo warbixinta farsamo ee laga keenay Beled xaawo ee gudiga xaqiiqa raadinta ay gudbiyeen in warbaahinta lala wadaagi doono maadama ay jiraan tuhano ku saabsan in la isla xiriirin karo kiisaska badda iyo mida derbiga Kenya.
W.D: Xasan Maxamed Aweys